Gari sodog iyo seedi midna ma taqaan ee gari Alley taqaan | Somaliland.Org
January 29, 2008	Marka aynu eegno nidaamkan inagu cusub ee waliba jiilasha danbe ku
cusub ee axsaabta badani is barbar socdaan iyaga oo loolamaya.
marka ugu horaysa waxa ay ubaahan yihiin cadaalad in loo helo in
ninkii la doortaa uu shaqeeyo kii la diidaana uu sugo wakhtigiisa.
hadii cadaaladaa la waayo horta sanduuq meel la dhigay iyo qof waraaq
ku riday midna isbadal ma keeni karo.Wixii ka soo baxa doorasho xukaamteedu cadaaladda ay ka fog yihiin waxaan filayaa in aanay horumar iyo wax lagu diirsado oo dadku ku qancaan, anay ka soo bixi karayn. Somaalidii hore ee xeerbeegtidoodii ayaa marka ay cid dhex dhexaadinayaan waxa ay odhan jireen: “Iillaahoow aqoona hanagu
cadaabin, eexna hanaga tagin”.
Cadaalada raga maanta laga sugayaa ee garta soorayaa waa gudida
doorashooyinka waa todobada nin ee la magacaabay iyo guud ahaan shaqalaha hay’adda doorooshooyin dalka, cidkastaaba ha u yeedhee waxa loogu yeedhay waa cadaalad iyo in ay dhexdhexaad noqdaan si looga badbaado wixii madmadow galin kara oo waliba dawladda maanta talada haysa ayaa loo baahan yahay in xooga la saaro ee awoodda u leh inay boobto doorashada. Sababtoo ah waxa ay dawladdu haysataa fursado aanay mucaaradku haysan.
Hadaan arinkaas maanta loo guntan xantuna waa badan tahay,Somaliland gudeheeda, waxa dhici karta inaynu dariiqii Kenya martay aynu maro oo ilaa maanta aduunkii oo dhami waan waan ka keeni la yahay, qasaare laxaad lihina uu ka dhacay.
Gari Alle ayay taqaan ee gari sodog iyo seedi midna ma taaqaan, siduu yidhi ina Sanweyne. Taasaa maanta gudida doorashooyinka looga baahan yahay in ay awoodooda saaraan wixii xumaada ee xagooda loo tiriyo iyaga ayaa ka masuul ah ninkii gar eexo qaadaa hadiiba dhibaato ka timaado isaga ayaa dambigeeda leh masuuliyad balaadhana weeye.
Hadaba su’aasha lays waydiinayaa ee dadkuna wax ku kala dooran karaa maxay tahay, axsaabteenu maxay ku kala duwan yihiin? Run ahaantii haddii aynu su’aashaas ka jawaabno, axsaabteenu wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto, sababtoo ah shuruucdoodu waa kuwo isku dhaw oo mabaadii isku mida leh. Guud ahaan dadka way u baaqayaan xisbi cid gaara u gacan haadaniyaa ma jiro oo dadka qaar iska fogaynayaa. Markaa ilbaabadoodu waa furan yihiin, oo mid aad isleedahay mabda’aas ayuu wataa oo ku raaci kari maysid ma jiro. Waxaynu hubnaa inay sadex magac oo kala duwan leeyihiin, madax kala duwana leeyihiin, oo haddii ay kala duwanaansho jirto haba yaraatee waxaan filayaa in ay intaa ku kala duwan yihiin.
Maxaa lagu kala dooran karaa?
Maanta miisaankee baynu isticmaalaa oo ku kala saarnaa. Miisaankii qabyaaladdu socon waa, kanaa markuu soo baxo xoolo kusiin socon wayday, xaasidnimadii socon wayday iyo hebel yaanu soo bixin waar bal maanta xagaynu u yaacnaa meel waliba isasa soo xidhaye?
Waxa aan ku soo gabagabaynayaa wadiiqo ayaa maanta inoo furan hadaynaan ka ilduufin. Taasoo ah sadexdaa xisbi ee reer Somaliland inaga oo aan kala jeclayn aynu ragga ay wadaan eegno, oo kooda ugu ragga wanaagsan ee aynu is leenahay raggaasi geediga halkaa maanta waa kasii wadi karaa umaddana noloshan maanta lagu jiro mid ka qabow oo ka degan bay gaadhsiin karaan aynu soo saaro.
Abdulqani Mohamed Hassan, Sweden